AirTies Air 4920 Smart Mesh User Manual - Akwụkwọ ntuziaka +
Akwụkwọ ntuziaka +
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ dị mfe.
Mbido » Ụgbọ elu » Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ AirTies Air 4920 Smart Mesh
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ AirTies Air 4920 Smart Mesh
April 26, 2018 April 27, 2018 10 Comments na AirTies Ikuku 4920 Smart Mesh User Manual
1 Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ AirTies Air 4920 Smart Mesh
1.1 Ntuziaka Ndenye Ngwa
1.1.1 Akwụkwọ ntuziaka / akụrụngwa metụtara
Maka ozi ọzọ:
Ntuziaka Ndenye Ngwa
1600 Mbps Smart Mesh Access Point Ikuku 4920
NT SRAS MFE: ACCESS POINT
1. Ọnọdụ otu Air 4920 na-esote rawụta gị ma jikọọ abụọ site na iji Ethernet mechie
USB (nkwụnye odo).
2. Jikọọ ngwaọrụ Air 4920 na ntanetị ma pịa ike ọkụ.
3. Chere ruo mgbe LEDs 5 GHz na 2.4 GHz na-acha akwụkwọ ndụ siri ike Nke a nwere ike iwe ihe dị ka nkeji 3.
4. Ugbu a, i nwere ike jikọọ mobile ngwaọrụ ọhụrụ gị wireless network.Factory ndabere netwọk aha na paswọọdụ na-kpọrọ na ala nke ngwaọrụ.
- Na ndị ahịa ọ bụla (dịka laptọọpụ, ekwentị ma ọ bụ mbadamba),
jikọọ na netwọk na labeelu.
- Tinye netwọk paswọọdụ mgbe kpaliri.
5. (Nhọrọ) can nwere ike ịgbanwe aha ntanetị (SSID) na okwuntughe nke netwọkụ gị.
Jikọọ na netwọk gị, mepee web ihe nchọgharị wee pịnye “http: //air4920.local” na
adreesị mmanya. Banye na ịnyagharịa SITUPU ngwa si ekpe ebi ndụ. (Ndabara nbanye paswọọdụ bụ oghere.)
Gbanwee mkpuchi gị WiFi (MESH):
Nkwadebe: Ijikọ ikuku ọhụrụ 4920
1. N’ime ụlọ ebe rawụta nọ, dobe Air 4920 ọhụrụ n’ebe dị anya gburugburu atọ
mita site na ngwaọrụ ikuku 4920 dị ugbu a, jikọọ ya na ntanetị ma chere ruo mgbe 5 GHz na 2.4 GHz LEDs na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (4 sekọnd ON, 4 sekọnd Gbanyụọ). Nke a nwere ike iwe ihe dị ka nkeji 3.
2.a Pịa bọtịnụ WPS na ẹdude Air 4920 (na-esote rawụta) maka 2 sekọnd na
mgbe ahụ na Ikuku 4920 ọhụrụ maka sekọnd 2 (2.b).
Ihe 5 GHz na 2.4 GHz LEDs na-amalite Flash na ngwaọrụ jikọọ na-akpaghị aka. Usoro a nwere ike were nkeji ise. E guzobere njikọ ahụ otu ugboro Ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (5 GHz LED ga-agbanyụ obere oge n'otu oge ọ bụla 5).
Ekele, ị hazie nke ọma ngwaọrụ ọhụrụ gị. A na-ahazi nzere ntanetị ikuku gị 4920 na-akpaghị aka na Air 4920 ọhụrụ gị.
Cheta na: Ọ bụrụ na 5GHz ikanam na ngwaọrụ ọhụrụ anaghị enwupụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ime nkeji ise,
biko kwughachi nzọụkwụ 2.
Tọlite ​​Ikuku 4920 n'ime ụlọ ị họọrọ
3. Ọhụrụ Air 4920 nwere ike ugbu a wepụ ya ma tinye ya n’ime ụlọ ị họọrọ.
Njikọ ahụ ga-eguzobe na-akpaghị aka. Usoro a ga-ewe nkeji atọ.
Mara: Ọ bụrụ na 5 GHz ikanam anaghị acha ọkụ (Ikanam 5 GHz ga-agbanyụ obere oge ọ bụla
5 sekọnd) n’ime nkeji atọ, biko gụọ isi nke “Nchọpụta nsogbu” (peeji nke 5).
4. (Nhọrọ) Ugbu a, ị nwere ike jikọọ ngwaọrụ wired (na nke aample, Igbe Set-Top) gaa ikuku 4920 site na iji eriri ethernet (plọg edo edo).
5. (Nhọrọ) Younwere ike ịgbakwunye Air 4920 ndị ọzọ na netwọkụ gị site na ikwughachi usoro 1.
Kwalite mkpuchi ikuku
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite mkpuchi ikuku n'ime ụlọ ọzọ, ị nwere ike ịtọ Air 4920 ọzọ. Ị nwekwara ike jikọọ ngwaọrụ site na Ethernet na Air 4920 a (maka ex.ampnwere STB, kọmputa ma ọ bụ ihe njikwa egwuregwu).
Ọ bụrụ na ebe ịchọrọ ikpuchi dị anya site na ikuku 4920 dị ugbu a, ịnwere ike ịwụnye Air 4920 ndị ọzọ iji ruo ebe ahụ.
Ndụmọdụ kacha mma ịrụ ọrụ:
- Gbanyụọ wireless ọrụ na modem gị.
- Debe nkeji dị na:
- Enwere ike nweta nnyonye anya eletriki. Akụrụngwa nwere ike ibute nnyonye anya gụnyere ndị na-akwado ụlọ, sistemụ nchekwa ụlọ, microwaves, PC, na ekwentị ikuku (ekwentị na isi).
- Nnukwu ihe igwe na ihe. Nnukwu ihe na mbara mbara dị ka iko, mgbidi a gwara mmanụ, enyo azụ, enyo, brik, na mgbidi siri ike pụkwara ime ka akara ngosi na-adịghị ike.
- Isi mmalite na ebe okpomoku dika oven na ime anwu n’igwe n’enwu n’enwu ma oburu na odi ezigbo ikuku.
-Ọzọkwa, a na-atụ aro ya nke ukwuu na a na-eji ike ọkụ na-enweghị mgbagha (UPSes) (ma ọ bụ, opekata mpe, ndị na-ahụ maka nchekwa) iji kpuchido ikuku 4920 na ngwaọrụ eletriki ndị ọzọ (modem VDSL, ndị na-anya ụgbọ ala/ọnụ ụzọ, igbe set-top, TV, wdg. ) site na ihe egwu eletrik. Oké ifufe eletrik, voltage surges na ihe egwu ndị ọzọ metụtara ọkụ eletrik nwere ike ibute nnukwu ngwaọrụ eletriki. Na mgbakwunye, ọbụlagodi nkwụsịtụ 1 nke abụọ na ọkụ eletrik nwere ike ibute modem niile, ndị ahịa ikuku, TV, igbe ntọala, wdg. Ọbụlagodi na akụrụngwa amalitela na-akpaghị aka, ọ ga-ewe ọtụtụ nkeji tupu sistemụ niile abịaghachi na ntanetị wee nye gị ohere ịnụ ụtọ ọrụ dabere na ịntanetị.
- laghachi na ntọala ụlọ ọrụ:
Iji laghachi otu ntọala na ntọala ụlọ ọrụ, pịa bọtịnụ nrụpụta (na obere oghere na azụ) maka 10 sekọnd. Mpempe akwụkwọ na-acha uhie uhie (nke nwere ogologo agbatị) ma ọ bụ ezé ezé siri ike bụ nhọrọ dị mma maka ọrụ a. Mgbe a na-ebute usoro nrụpụta ahụ, ndị LED n'ihu ga-adịru nwa oge “shmer” na nkeji ga-agbanye (n’ihe dị ka nkeji atọ) gaa ntọala ụlọ ọrụ.
- Ọ bụrụ na ị hazie ntọala netwọk, biko dekọọ ha ebe a:
Aha netwọk: ………………………………………………………………
Network Paswọdu: …………………………………………………………
Ọrụ Paswọdu Paswọdu:
Ngwaahịa a na -eji ngwanrọ nke ndị mepere emepe mepere emepe. Ngwa ọ bụla dị otú ahụ nwere ikike n'okpuru usoro ikikere akọwapụtara dabara na ngwanrọ ahụ (dịka GPL, LGPL wdg). Enwere ike ịhụ ozi zuru oke na ikikere na usoro ikike dị na ngwa onye ọrụ ahụ. Site n'iji ngwaahịa a, ị kwenyere na ị nwetala yaviewedepụtara usoro ikikere dị otu a yana na ị kwenyere ka ha kee gị. Ebe okwu dị otu a na -enye gị koodu isi mmalite nke sọftụwia a, a ga -enweta koodu isi ahụ na ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na AirTies rịọrọ gị. Iji nweta otu koodu isi mmalite, biko ziga arịrịọ gị na ederede site na email na [email protected] ma ọ bụ site na ozi ejula na: AirTies Wireless Communications Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Mba: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies ga-ezitere gị CD nwere koodu isi rịọrọ maka $ 9,99 gbakwunyere ụgwọ mbupu. Maka nkọwa biko kpọtụrụ [email protected]
Akwụkwọ ntuziaka / akụrụngwa metụtara
Ntuziaka Ntanetị Bluetooth Mesh
Bluetooth ntupu IZIR UserTA akwukwọ ntuziaka - Kachasị PDF Bluetooth ntupu IZIR UserTA ntuziaka akwukwọ - Original PDF
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ SHARP Air Conditioner
Gelius AIR TWS Isi Ntuziaka Onye Ntuziaka
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ Gelius AIR TWS Headset Gelius AIR TWS - Kachasị mma PDF Gelius AIR TWS…
Herense Ntụ oyi System User Manual
Hisense Air Conditioning System User Manual service-njikwa-hisense-ọhụrụ-nkasi obi-wandmodel-Kachasị mma
April 26, 2018 April 27, 2018 Ihe naỤgbọ eluTags: Air 4920, Ụgbọ elu, ntuziaka onye ọrụ
air4920.local [rawụta Banye]
Soro mkparịta ụka ahụ
Ntughari ekwu, sị:
Enweghị m ike ịnweta paswọọdụ ịbanye na onye ndọtị, dịka e kwuru na akwụkwọ ntuziaka, paswọọdụ bụ blanket, ana m anwale nke a ma enwetaghị m ohere ahụ, ma achọrọ m paswọọdụ ndabara dịpụrụ adịpụ ma enweghị m ike ịhụ na ngwugwu nke ma ọ bụ na ndọtị onwe ya.
asel ekwu, sị:
E mebiri bọtịnụ izu ike m kedu ka m ga-esi zuru ike na-enweghị bọtịnụ ahụ? ……
na odighi onye gha abia dozie ya na ulo…
gigi ekwu, sị:
May 20, 2021 na 3: 18 am
Nwere ike ịtọgharịa site na ịdebe pịa WPS bọtịnụ 10 sekọnd
Mary Buckman ekwu, sị:
June 25, 2020 na 7: 54 am
Agaghị m azụta ndị a ọzọ! ha dị mma mgbe ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana mgbe enweghị ndị ga-akpọ enyemaka, agbalịrịla ịkpọ nọmba ọ bụla m nwere ike ịchọta.
Ron ekwu, sị:
October 16, 2020 na 6: 29 pm
Onye ndọtị AirTies 4920 nwere ike ịrụ ọrụ na netwọkụ ntupu yana onye ndọtị AirTies 4921?
Kelvin Miller ekwu, sị:
Enwere m nkeji iri abụọ. Otu elu steepụ na isi unit jikọọ na modem ala steepụ. Enwere m nke dị n’elu elu n’akụkụ m cube ọkụ ma cube ga-ejikọ naanị na nke mgbago steepụ. O yiri ka ọtụtụ ihe site na ọnọdụ na-ejikọta na steepụ ala kama nke elu steepụ. Enwere ụzọ ịmanye ihe ndị a ka ha jikọọ na ngalaba ndị na-emechi emechi?
Andy Mulchek ekwu, sị:
Anaghị m akwado, mana nghọta m bụ na igwe ejikọtara na modem na-ewepụta netwọkụ ahụ, a ga-ejikwa ya na ụlọ ahụ dum. Akụkụ ndị ọzọ ga-eme ka mgbaama ahụ dịkwuo elu, ma gbasaa netwọk guzobere site na nkeji mbụ. Yabụ, ị jikọọ na netwọkụ guzosiri ike site na nkeji mbụ, ngalaba ndị ọzọ na - eme ka ihe mgbaàmà dị maka gị.
Mark ekwu, sị:
August 24, 2021 na 8: 05 pm
Kedu ihe bụ WPS pin maka AirTies Air 4920
Skipper ekwu, sị:
Abụghị m onye nlekọta bọọdụ a. Nke a bụ ihe m mụtara taa. Ruo afọ abụọ, ejiri m nkeji AirTies 4920 abụọ rụọ ọrụ nke ọma, nke m zụtara dị ka mkpọ abụọ (yabụ na ha abụọ nwere otu aha na paswọọdụ wifi nke ụlọ ọrụ mepụtara). Echichi mbụ ahụ dị mfe.
Taa agbakwunyere m nkeji nke atọ 4920. Tupu m amalite, nkeji abụọ mbụ na -arụ ọrụ (bọtịnụ 5 GHz na -efegharị kwa sekọnd ise ọ bụla). Na laptọọpụ m, ahụrụ m otu ihe atụ nke aha wifi nke ụlọ ọrụ ahụ setịpụrụ, enwere m ike ijikọ ya na ikuku na-eji paswọọdụ ụlọ ọrụ ahụ setịpụrụ. Enwere m ike ijikọ na nke ọ bụla site na iji eriri ethernet.
N'oge a, kọmpụta m nwekwara ike ịhụ ike nke atọ na listi netwọ wifi ya, mana enweghị m ike ijikọ ya site na iji aha na paswọọdụ wifi nke ụlọ ọrụ ya setịpụrụ. BTW, oge ụfọdụ, m na -edozigharị nkeji atọ niile na ntọala ụlọ ọrụ ha site na iji mpempe akwụkwọ n'ime oghere Tọgharia dị nso na eriri ọkụ, mana nke ahụ nwere ike bụrụ naanị maka nkeji nke atọ nke m zụtara “jiri nwayọ”.
Ngalaba 4920 nke ejikọtara site na eriri ethernet na rawụta, bụ nna ukwu. Iji gbakwunye nkeji nke atọ, akwadoro m ya n'ihe dị ka mita ise site na ngalaba nna ukwu. Enweghị eriri ethernet agbakwunyere na nkeji nke atọ. M pịrị maka sekọnd 5 bọtịnụ WPS na ngalaba nna ukwu. M wee pịa bọtịnụ WPS nke atọ maka sekọnd abụọ. Echere m nkeji 2-2, ma nkeji 'bọtịnụ 3 GHz malitere ịmịgharị kwa sekọnd ise ọ bụla (nkeji nke atọ were ogologo oge). N'oge ahụ, ugbu a ejiri nkeji atọ rụọ ọrụ, kọmpụta m hụrụ naanị aha wifi nke otu nna ukwu (nke ejikọtara site na waya na rawụta).
Na -eji onye njikwa router m web peeji, enwere m ike ịhụ na router na -ahụ nkeji atọ (nke ọ bụla nwere adreesị IP dị iche). N'iji adreesị MAC egosipụtara na ibe nchịkwa router na ala nke ngalaba nna ukwu, m chọpụtara adreesị IP nke onye nwe ya. Mgbe ahụ na laptọọpụ m, abanyela m adreesị IP ahụ na taabụ ihe nchọgharị ọhụrụ, nke ahụ nyere m ohere ịgbanwe aha na paswọọdụ wifi. Emechaala (anwala ịgbanwe aha na paswọọdụ wifi na nkeji abụọ ndị ọzọ).
Ugbu a, ka m na -arụ ọrụ atọ, enwere m ike iji ngwaọrụ mkpanaka m na -ejegharị ma ha na -ejikọ aka na akpaghị aka na akara siri ike. Dị nnọọ jụụ ma baa uru. Ọ dị m ka ya bụrụ na m mere nke a afọ abụọ gara aga.
Edebere m Wi -Fi rawụta. Maka m, anaghị m ahụ nnyonye anya na ya, yabụ ana m edebe ya dịka azụ, ọ bụrụ na m ga -alaghachi na wifi rawụta. BTW, n'ọnọdụ m, akara wifi sitere na nkeji atọ dị ike karịa onye na -ahụ maka ikuku, ọsọ ikuku na -adịkwa okpukpu abụọ karịa, elu na ala.
January 14, 2022 na 2: 28 am
Ọ ga-ekwe omume iji ihe ndọtị a na-eji rawụta ndị ọzọ? Achọrọ m ịma ihe WPS pin koodu bụ onye ọ bụla maara?
Zọpụta aha m, email, na websaịtị dị na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga -aza ajụjụ.
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ AJAX 8706 Keypad Wireless Touch Keyboard
Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman nwere akwụkwọ ntuziaka ntuziaka.
AJAX 7661 StreetSiren Ikuku n'èzí Siren akwụkwọ ntuziaka
AJAX 17938 12V PSU maka akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ na-eweta ike Hub/Hub Plus/ReX
AJAX 10306 Nyefee na akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ntụgharị ikuku ikuku
MARK L PETERKA on ZERFUN G8 Pro Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ igwe igwe ikuku
Kurt on Airrex Infrared Heater AH-200/300/800 Ntuziaka Ntuziaka
Eserese Toyota Camry Hybrid LE Fuse Box 2017 on Eserese igbe ọkpọ Toyota Camry
2017 Mitsubishi Lancer 4WD Fuse igbe eserese on Eserese Igbe Mitsubishi Lancer na Injin Fuse
K Townsend on Mira Honesty ERD Bar Valve na ntuziaka onye ọrụ
Akwụkwọ ntuziaka +,